Su’aalo – somali
Waa maxay qaaxadu?
Qaaxadu waa cudur ay sababto bakteriada Mycobacterium tuberculosis.
Sideebay qaaxadu u faaftaa?
Qaaxadu waxa ay u faaftaa qof ilaa qof kale iyadoo hawada raacaysa. Bagteriada qaaxada wax ay gashaa hawada marka qofka qaba qaaxada sambabka uu hadlo, qufaco, hindhiso ama uu heeso. Dadka kale ee qolka kula jira waxa soo gaadhaysa bakteriada sambabadooda marka ay neefsadaan hawada deedna cudurka ayay la kulmayaan. Xubnaha qoyska ee meel kuwada nool ayaa ayaa intabadan cudurka qaada.
Curdurka ma qaadayaa hadii aan nadiifiyo guriga bukaan isbitaalka loo dhigay qaaxada?
Qaaxada laguma kala qaado weelka waxa lagu wada cuno, cabitaanka, cuntada, dharka iyo taabashada gooba ka mida guriga. Bakteriada qaaxada waxa ay gashaa hawada marka qof qaba qaaxada sambabka uu qufaco, hindiso ama uu heeso. Dadka kale ee kula nool isla goob gudaha ah sida (isla qol ama guri) ayaa bakteriadu u gudbi kartaa sambabkooda, marka ay hawdan neefsadaan ayay qaadayaan cudurka. Marka qofa bukaa ka baxo qolka, bakteriadu weli waxa ay ku sii jirtaa hawada qolka mudo saacado ah. Khaas ahaan meelaha aan hawada loo furin. Hadii qofka bukaa ka baxo qolka saacado badan horteed oo qolkan hawada loo furay khatartu qaaxadu way ka yaraanaysaa qofka nadiifinaaya qolka.
Miyaa qaadayaa curdurka hadii qofka qaba qaxda, gacan qaado ama aan laabata u qabto?
May. Qaaxadu kuma fido taabashada iyo in jidhku istaabto. Qoraalka sare eeg sidee ayay qaaxadu u faaftaa?
Miyaan qaadayaa cudurka hadii la isticmaalo gaadiidka dadwaynaha qof qaba qaaxada sambabka?
Waxa khatar ah oo in cudura la qaadayo majirto hadii a tahay kulan marmara ama sarfar gaaban mar kelya oo buska ama treenka. Khatartu wax ay badanaysaa hadii aad caadaysatid isla bus ama treen oo aad la raacidid qof buka ama isla dayaarad. Hadii aad isla dayaarad la raacdo qof qaba cudurka, safarkuna qaadanaaya mudo ka badan 8 saacadood ama ka badan ayaa khatartu badantay marka loo eego duulimaadiyada mudadoodu gaabaantay. Maamulka masu’uulka ka ah cudurada faafa cadayn kara dadkaas kuwa ay ahaayeen oo lana xidhiidhi kara.
Bukaanada cudurka qaaxada oo dhami ma faafin karaan cudurka?
Maya, sida la ogyahay waxa qudha ee faafin karaa waa qofka qaba cudura qaaxada sambabka. Qofa bukaa waxa uu si dhibyar u faafin karaa qaaxada hadii isagu/iyadu uu qabo qaaxada qodatada oo sambaba godad u samaayso ama hadii xaakada lag helay bakteriada.
Mayuu qofasta oo la kulmay bukaan qaaxa qaba uu qaada cudurka qaaxada?
Maya. Cudurka qaaxada si dhibyar looma kala qaado, sedexdii qofba hal qof oo ka mida dadka mudo dheer la noolaa ama la degenaa qof qaba cudurka qaaxada ee la isku gudbin karo ayaa qaada cudrua qaaxada. Xubanha qoyska meel kuwada nool ay ah kuwa khatarta ugu badan ugu kujira inay qaadaan. Qayb ka mida dadka la kulmay cudurka qaaxada ayuun baa uu ku dhici karaa.
Majiraa baadhitaan lagu cadayn karo in qaaxada aad qaaday.
Majiro baadhitaan fiican oo qudha si loo ogaado in qofku la kulmay bakteriada qaaxada. Laba baadhitaan ayaa la isticmaalaa oo jidhka lagu mudo (Mantoux Tuberculin oo jidhka lagu tijaabiyo TST) iyo Baadhitaanka dhiiga (IGRA). Badhitaanadan waxa la isticmaalaa kolba sida talada heer qaran ay tilmaamayso.
Qofka la gulmay bagteria qaaxada waxa ma qaadsiin karaa?
La kulanka bakteriada qaaxada ma la daawaynkaraa?
Haa. Waa suurtagal in la daawaeeyo qofka la kulma bakteriada qaaxada. Finland waxa daawooyin la siiyaa dadka bakteriada qaaxada la kulmay oo la noolaad dad qaba cudurka qaaxada kuwaas oo da’doodu ay yartay 16 sanadood. Daawada waxa kale oo la siin karaa qaar ka mida dadka waawayn tiiyo ku xidhan kolba talooyinka haya’da caafimaadka.
Qaaxadu ma anigaa isku gaystay?
Maya. Kuma xidhna qoloqol, jinsiga, d’ada, xirfada ama qiimahaaga mujtamac, qof kasta oo la kulma bakteriada qaaxada cudurku wuu u jiran karaa.
Cudurka qaaxada ma qaadi karaa xataa haddii caafimaadkaygu uu fiican yahay oo aan naftaydana si fiican u daryeelo.
Haa waad qaadi kartaa.
Dadka la kulma cudurka qaaxada faafta oo dhami, ma u bukoodaan cudurka qaaxada?
Maya. Tobankiiba hal ka mida dadka waawayn ee la kulmay bakteriada qaaxada ayaa u bukooda curdurka qaaxada. Nus ka mida kuwaas waxa ay yeeshaan calaamadaha qaaxada muddo laba sano gudahood marka ay la kulmeen ka dib. Nuska labaad waxa ay qaaxad u bukoon doonaan qaaxada mar dambe noloshooda.
Caruurta iyo dadka dhalintayari ma si a dhibyar ayay u qaadaan cudurka qaaxada marka loo eego dadka waawayn?
Haa. Caruurta caano nuugga ah iyo caruurta kale ee yaryari waxa daciifa daafacooga jidhka. Haddii ay la kulmaan bakteriada qaaxada si dhaqso ah ayay u bukoon karaan, xanuunkuna waxa uu halis gelin karaa naftooda. Dalinyarada da’doodu u dhaxayso 15-20 sano waxa ay u nugul yihiin in ay qaadaan cudurka qaaxada.
Sideebay cudurada iyo dawooyinka difaaca jidhka u daciifiyaan oo ay raad ugu yeeshaan qaadintaanka cudurka qaaxada?
Cuduro gaara ama daawooyin wax lagu daaweeyo ayaa daciifin kara difaaca jidhka. Marka qof difaaciisa jidhku uu daciifo, jidhku iskama xakamayn karo bakteriada qaaxada. Haddii bakeriadu ku badato jidhka dhexdiisa, cudurka qaaxadu wuu soo baxayaa. Sababtaas awgeed ayuu fursadda ay u qaadi karaan cudurka kooxdaasi way badantay.
Maxay muhiim u tahay in aan ogaado in aan qabo cudurka HIV?
Sababtu waxa ay tahay in HIVgu uu daciifiyo difaaca jidhka, dadka la kulmay cudurka qaaxda ilsamarkaasna qaba HIV waxa ay khatar badan ugu jiraan in ay qaaxadu ku dhacdo maruun cimrigooga.
Cudurka qaaxada ee ku dhaca dadka qaba HIV ma la midyahay qaaxad dadka aanqabin HIV ku dhacda?
Dadka qaba HIV waxa intabadan qaaxadu kaga dhacdaa meelo jidha ah oo aan sambaba ahayn marka loo eego kuwa aan qabin HIV. Hadii cudurka HIV aan la daawayn qofkuna uu gaadho xaalada AIDS, cudurka qaaxadu si dhaqso ah ayaa loo qaadi karaa. Cudurkaasi waxa uu ku faafi karaa jidhka issago noqon kara mi aad u adag.
Miyaa lag baadhaan bukaanada qaba cudurka qaaxada HIV?
Baadhitaan HIV ayaa bukaanasta oo qaba qaaxada loo sameeyaa.
Mudo intee leega aya calaamdaha cudurka qaaxadu ku soo baxayaan lag bilaabo marka qofku la kulmo bakteriada?
Taasi waxa ay ku xidhantay qofka da’diisa, iyada/isaga difaaciisa jidhka iyo caruurta yaryar oo talaalku difaaco. Caruurta ka yar 5 sano oo aan qaadan talaala qaaxada (BCG) waxa ay u bukoon karaan si degdeg ah (xataa ha bil ka dib marka ay la kulmeen bakteriada qaaxada).
Dadka waa wayne ee uu difaacooga jidhku uu caadiga yaha waxa ay calaamdaha cuduru ku soo bixi karaan mudo ah 6-12 bilood ka dib marka cudurka lala kulmo. Bakteriada qaaxadu waxa ay ku jiraysaa jidhka iyado huruda oo aan cudur keenaya ( waxa loo yaqaanaa xanuun dahsoon) xanuunku waxa uu soo bixi kara mar dambe marka uu difaaca jidhkoodu uu daciifo, oo ka imman kara da’da ama xanuun ama daawooyin la qaatay.
Jidha qaybahee ayaa qaaxadu u dhacdaa?
Bageteriada waxa ay sababaysaa caabuq ay gaadhsiiso xubno badan, laakiin waxa ay inta badan ku dhacdaa sambabada.
Nooc aad ugu badhan ee qaaxadu ee qaybaha kale ee jidhka marka laga reebo sambabka waa qaaxada qanjidhada. Qofka qabaa xanuunka qaaxadu waxa u yeelan karaa islamar qaaxada sambabka iyo qaaxada qaybo kale ee jidhka.
Waa maxay claamadaha qaaxadu?
Claamadaha guud ee cudurka qaaxadu waa, nafsad daro cuntada, miisaanka oo hoos u dhaca, daal, Dhidid badan habeenkii, qadhqadhyo ama xumad. Caruurta qaaxadu waxa ay u muuqankartaa koritaanka oo hooseeya.
Calaamadah gaara ah ee qaaxadu waxa ay ku xidhantay qaybt jidhka ee kolba ku dhacdo. Claamadaha qaaxada sambabku waa qufac jira mudo sedex todobaad iyo ka badan.
Hadii qofku qabo qaaxada qanjidhada, qanjidhadaa caabuqay waxanay yeelanayaan barar iy in ay waynaadaan. Qanjidhada bukoodaa waa kuwa qoorta inta badan, waxa kale oo bukoda kuwa kilinkilooyinka iyo goljilicda, Intabadan qanjidhadu danqasho ma laha hadii ay adagyihiin. Marka uu xanuunku sii socodo qanjidhku waa casaan waana jilcayaa. Qanjidhka hadhuu dheecan galo wuu dilaacayaa.
Cadynta cudurka qaaxada
Sideebaa loo cadyn karaa cudurka qaaxada?
Qaaxada sambabada waxa inta badan lagu helikaraa sawirka x-ray ee laabta waxana in cudurku jiro lagu go’aamin karaa baadhitaanka qaaxada. Waxa la isticmaala hab gaara oo lagu diyaariyo tiiyo la midabaynaayo xaakada, Miariscoopka waxa lagu arki karaa bakteriada qaaxada. Hadii qaaxadu lagu beero meel way cadynkartaa cudurka. Waqtiyada qaarkood waxa loo baahdaa in la sameeyo bronscopy oo ah qalab duumaha sambab iyo qalabka CT scan ee sambabada.
Ilmaha yari xaakada wuu liqaa markaas lagama qaadi karo shaybadhka xaakada sida dada waawayn. Sidaas aawadeed habka midabaynta qaaxada iyo abuurka xaakada waxa loo isticmaalaa dhecaanka caloosha oo la soo qaado. Badhitaankan wuxuu ka dhacaa isbitaalka.
Baadhitaano kala duwan oo qalabka waxa lugu baadho ah ayaa lagu isticmaalaa baadhitaanka qaaxada ee xubnah kale marka sambabka laga reebo.waxa kale oo la qaadaa cadadka jidhka iyo dheecaamada meelaha jidhka ee cudurku ka hayo qofka oo laga qaado deedna la baadho.
Bukaanka halkee lagu baadhaa?
Goobta baadhitaanku waxa ay ku xidhantay xaalada iyo calaamadaha bukaanka. Sawirka x-rayga laabtu waxa lagu saarikaraa qofka goobta caafimaadka asaasiga ah sida goob caafimaad. Xaakada waxa qofka lagaga soo qaadikaraa guriga sedex arroorood oo isku xiga.
Go’aanka cadaynta cudurka iyo daawayntuba waxa ay ka dhacaysaa isbitaalka, qaybta u gaarka ah takhasuskaas. Caruurta ka yar 16 sano waxa lagu baadhaa qaybta caruurta iy waadhka caruurta. Dadka waawayn waxa lagu baadhaa qaybo kala duwan kolba calaamadahoodu sida ay yihiin. Masalan hadii qaaxada sambabka lagaaga shakiyo baadhitaanku wax uu ka dhacayaa bukaan socodka ama waadhka cudurada feedhaha. Hadii laga shakiyo qaaxad qanjidhada waxa qofka baadhaya dakhtarka takhasuska dhegaha.
Waa maxay qiimaha daawaynta qaaxadu?
Qaaxad intabadan waa cudur faafa oo dhibaato badan. Sida ay tilmaamayso xeerka cudurada faafa daawaynta qaaxada iyo baadhitaanka qaaxadu marka la tuhmo qaaxadu waxa ay u tahay bukaanka lacag la’aan Finland.
Goorma ayaa buaanka cudurka qaaxada lagu takooraa isbitaalka?
Akhri macluumaad deeraada taageerada/takoorka.
Ma dhacaysaa in qofka la tagooro isaga oo aan raali ka ahayn?
Haa, waa suurtagal tiiyo la tixraacaayo xeera cudurada faafa, go’aan in khasab lagu takooro ayaa la qaadan karaa oo labadii biloodba mar.
Goormaa go’aana khasabka ah la qaadan karaa?
Go’aana khasabka ah ee takoorka waxa lagu qaadan karaa masalan hadii bukaanku uu qabo qaaxada faafta oo daawadan googooyo.
Waa maxay sababta bukaanka curdurka faafin kara ee qaaxada loogu takooraa isbitaalka?
Intee in leeg ayaa bukaanka lagu hayn karaa takoorka?
Bukaanka qaba cudurka qaaxada ma la soo siyaaran karaa mudada uu ku jiro takoorka?